လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
အဖွဲ့အစည်းများအတွက် HRM ၏အစိတ်အပိုင်းကိုရှင်းလင်းရန်။
အဓိက HRM လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဘို့ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဆန်းစစ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းအဖွဲ့, ကြီးမားသို့မဟုတ်နည်းနည်း, လုပ်ကိုင်ဖို့စီးပွားရေးသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတစ်ခုဌန်အသုံးချ။ မြို့တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဘို့အလစာဖန်တီးရန်အသုံးပြုပိုက်ဆံ, ပိုင်ဆိုင်မှု, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်ထည့်သွင်း။ တစ်ဦးအကြံပေးခြင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကတင်းကျပ် programming ကိုသို့မဟုတ်အဆောက်အဦများရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးလက်လီတည်နေရာ, မှတ်ပုံတင်နှင့်စာရင်းအသုံးချ။ မည်သို့ပင်လုပ်ငန်း, ရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းများနညျးတူသူတို့ကိုအရာဖြစ်စေခြင်းငှါ: သူတို့အဘို့မိမိတို့မြို့တော်အလုပ်လုပ်တစ်ဦးချင်းစီရှိသင့်တယ်။ ဤသည်အကြောင်းအရာအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်: ဝင်ငွေအသက်အရွယ်ဆက်ဆံရေးဟာအဆောက်အဦစွမ်းရည် 'နှင့်စွမ်းရည်ကိုသုံးနိုင်သည်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု (HRM) သူတို့နှင့်အတူဖော်ထုတ်မူဝါဒများအတွက်သူတို့ကိုကျင်းပရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်သူတို့ကို remunerating, သူတို့ကိုပြင်ဆင်နေ, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးချဖို့ဆီသို့လမ်းဖြစ်၏။ လယ်အဖြစ်, HRM ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်သိသိသာသာပိုပြီးအရေးပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးခြင်း, လတ်တလောအနှစ်နှစ်ဆယ်တစ်လျှောက်လုံးမြောက်မြားစွာတိုးတက်ရေးပါတီကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ မီ, HRM ၏အောင်မြင်မှုဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, နေ့၏အဆုံးတိကျစွာ-မှာထွက်ဝိုင်းတစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း၏ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏခဲ့ကြသည်အဖွဲ့အစည်းကခရီးစဉ် orchestrating, ကိုယ်စားလှယ်များမှမွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့ခြင်း, ဘဏ္ဍာရေးကိုင်တွယ်ဆိုလိုနှင့်ပုံစံမျိုးစုံစေရေး အသင်း။ ဂျက် Welch, General Electric နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုမာစတာ၏ယခင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တခုလုံးတက် HRM ၏အသစ်အစိတျအပိုငျးက "စုဝေးများနှင့်မွေးနေ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်စစ်သားစုဆောင်းရေးဘောင် Escape ... ကိုသတိရပါ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အကြီးအခွအေနမြေားအတွက်အရေးပါသည်, HR ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ " (Frasch , et ။ al ။ , 2010) ။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီညွှန်ကြားရေးမှူးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူဖော်ထုတ်အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်, ဒီအကြောင်းအရာအစောဆုံးရည်ညွှန်းအချက်မှာ, ဒီမှာဖို့အာရုံကိုဖုန်းဆက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်တို့ HR ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ခေါင်းစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်ငါတို့သည်အ HRM တာဝန်ကျတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြားအားလုံးသို့မဟုတ်လျှင်ဘာမျှထွက်မကစားပါလိမ့်မယ်မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ, အရှိဆုံးကြီးကြပ်ရေးမှူးလုပ်ခ, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်သားများ-အောင်သည်ဤရှုထောငျ့ HRM ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲ။ ထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်ကိုတစ် HR စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသူကိုတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူကိုင်တွယ်မည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မှအလားတူအရေးကွီး၏။
HRM ၏မြောက်မြားစွာသောဒြပ်စင်ထိုနည်းတူသည်အခြားရုံးအကြီးအကဲယူမှေးလုပျငနျးလမ်းကြားမှ, ဒီဒေတာကိုမရှိမဖြစ်သောအရာတည်းဟူသောလုပ်ဆောင်အမှုကိုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အများစုမှာအထူးကု HRM အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကစားသူခုနစ်မူလတန်းအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် concur ။ ဤပူးတှဲအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပုံဖော်နေကြသည်။
သင်ကအသင်းအဖွဲ့အတွက်အမှုကိုနှင့်ပြည့်စုံအလုပ်ဖျော်ဖြေဖို့တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ပင်အများဆုံးခေတ်သစ်စက်တွေနှင့်အတူလူသားများအဖြစ်သေးလိုအပ်သည်။ ဤအလိုင်းများတလျှောက်တွင်, HRM အတွက်သိသာထင်ရှားသောဆောင်ရွက်ချက်များ၏တဦးတည်းထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးလျော်ကြေးငွေအစုအဝေးကိုစီစဉ်တခုတခုအပေါ်မှာသိမ်းပိုက်တင်ဆက်ထားပါတယ်ကနေတပြင်လုံးကိုဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်အတွင်းပိုင်း, လေးခုအခြေခံတိုးတက်လာရှိပါတယ်:
တစ်ဦးဝန်ထမ်းများအစီအစဉ်၏တိုးတက်မှု။ ဒီအစီအစဉျကိုသူတို့ဝင်ငွေအလိုဆန္ဒများ၏အလငျး၌ employ သင့်တယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အဘယ်အရာကိုအရေအတွက်ကရိပ်မိဖို့ HRM နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်မှာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ဝါဒီများကိုစွမ်းအားမှမူဝါဒများတိုးတက်မှု။ ကျနော်တို့ကလုပ်သားအင်အားအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များတစ်ခုဌန်ကနေပိုပြီးမြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းစီရှိသည်အဖြစ်အလုပ်ခွင်ထဲမှာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ, ပို. ပို. အရေးပါတက်အဆုံးသတ်သည်။
ပြဌာန်းခွင့်။ ဒီအဆင့်မှာတော့တစ်ဦးချင်းစီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှေးခယျြနှင့်သင့်လျော်သောလုပ်ခအစုအဝေးကိုစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတိုးတက်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုပြင်ဆင်နေမှတဆင့် trailed ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းအဖွဲ့အသင်းအတွင်းအပြင်အကြောင်းနှင့်ကွက်တိဝင်အာမခံဖို့မူဝါဒများရှိပါတယ်။ HRM ၏အလုပ်အကိုင်တစ်ခုမှာဤအမူဝါဒများလွှမ်းခြုံသည့် verbiage တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မူဝါဒများ, HRM, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အရာရှိများကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်၏တိုးပါတယ်။ ဥပမာ, HRM ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကောင်းမဟာဗျူဟာ compose, ထိုချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ခံစားခကျြကိုကြည့်နေတဲ့မဟာဗျူဟာသို့မဟုတ်အစီအစဉ်အတွက်ခြားနားချက်များအတွက်လိုအပ်ချက်ရိပ်မိမည်, ထိုနောကျမှလုပ်သားများမှချဉ်းကပ်သိရှိစေရန်။ ဒါဟာ HR ကွဲပြားမှုကိုမကျင့်နှင့်တစ်ဦးတည်းအလုပ်မနိုင်မဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့ကအသင်းအဖွဲ့အတွက်တိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အခြားဌာနခွဲထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြုပါသောသူအပေါင်းတို့သည်။ အလုပ်ခွင်မူဝါဒများအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားမှုပူးတှဲဖြစ်နိုင်သည်:
HRM ကျွမ်းကျင်သူများကြောင့်လုပ်ခအတည်ပြုဖို့လိုပါတယ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ်စက်မှုလုပ်ငန်း gauge နှင့်တွေ့ဆုံပြီးလျှင်, အသင်းအဖွဲ့များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးချင်းစီဆွဲဆောင်ဖို့လုံလောက်မြင့်မားသည်။ လုပ်ခအလုပ်သမားသူသို့မဟုတ်သူမ၏အလုပ်အတွက်ရရှိသွားတဲ့ဘာမှထည့်သွင်း။ ထို့အပွငျ HRM ကျွမ်းကျင်သူတွေကလျော်ကြေးငွေနှိုင်းယှဉ်အလုပ်အကိုင်ဖျော်ဖြေသည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီပေးဆောင်လျက်ရှိသည်အရာကိုလက်တွေ့ကျကျတူညီသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသင်းအဖွဲ့နှင့်အတူနှစ်ပေါင်း၏အရေအတွက်စဉ်းစားကြောင်းလစာမူဘောင်, အတွေ့အကြုံ, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်အမြင်များနှစ်တက် setting ပါဝင်သည်။ အလုပ်သမားလုပ်ခ၏အမှုများကိုပူးတှဲပါထည့်သွင်း:
401 (ဋ) (အငြိမ်းစားဒီဇိုင်းများ)
ဒီပြည့်စုံ rundown မဟုတ်ပါဘူးကတည်းကလစာအခန်း6"လုပ်ခနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ" တွင်အကူအညီပေးရန်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
ကို Maintenance အသင်းနှင့်အတူဆက်ရှိနေရန်လုပ်သားများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတက်အကျကိုအဆုံးအဖြတ်ပါဝင်သည်။ လုပ်ခကိုယ်စားလှယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များလည်းရှိပါသည်။ အလုပျသမားမြား၏ 90% ပူးတှဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထားခဲ့ပါ:
မည်သို့ပင်ဒီ, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ်စားလှယ်များဘာလို့လဲဆိုတော့လစာ (Rivenbark, 2010) ၏စွန့်ခွာလို့ထင်ပါတယ်။ လုပ်ခကိုသူတို့မဆိုနည်းလမ်းဖြင့်စွန့်ခွာနေသောအကြောင်းပြချက်မပါသောအခါနောက်ပိုင်းတွင်, အကြီးအကဲများမကြာခဏ, ထွက်ခွာရာမှတစ်ဦးချင်းစီကာကှယျပေးဖို့သူတို့ရဲ့လစာအထုပ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစား။ အပိုင်း7"ကို Maintenance နှင့် Motivation" နှင့်အခန်း 11 "အလုပ်သမားအကဲဖြတ်" ဤလေးအစိတ်အပိုင်းများအလင်း၌အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များကျင်းပရန်အနည်းငယ်နည်းစနစ်ဆန်းစစ်။
ကျွန်တော်သစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်များဆီအကူအညီတောင်းဖို့စွမ်းအင်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့လှုပ်ရှားမှုထွက်သယ်ဆောင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်သေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုအတွက်ထွက်ပေါ်လာ။ ပြင်ဆင်နေဒါ့အပြင်အလုပ်သမားလှုံ့ဆော်မှုအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်နေကြသည်ဟုခံစားရသူကိုမှကိုယ်စားလှယ်များတိုးချဲ့အလုပ်သမားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းကိုတတ်၏ရာ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်သောအလုပ်အကိုင်၌ သာ. ရွှင်လန်းကြတဲ့သဘောထားကို, ရှိသည်။ စီမံကိန်းများပြင်ဆင်နေ၏အမှုများကိုပူးတှဲပါထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ:
အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တိကျတဲ့ PC ကို program ကို run ဖို့ဘယ်လိုဥပမာ, ပြင်ဆင်နေ
လူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဦးချင်းစီအလုပ်ခွင်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောဥပဒေများအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးက HRM ကျွမ်းကျင်သူကဤဥပဒေများအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်:
HRM ၏တရားဝင်အခွအေနေအစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်, ဒါကြောင့် HRM မူတည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်သောတပြင်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအသင်းအဖွဲ့အဲဒီတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြပြီးနောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့်။ HRM ဥပဒေများတဝိုက်ဗဟိုပြုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမိတ်ဆက်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသိသာထင်ရှားသောအပိုင်းများတွင်ဤဥပဒေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ဤအအစစ်အမှန်အစိတ်အပိုင်းများထက်အခြား, ကြီးသော relational အရည်အချင်းများနှင့်အံ့ဖှယျစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ထိရောက်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြည့်စွက်ယေဘုယျစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။
အူအချက်များကြီးကြပ်သို့ရာတွင်ထို HR ဒါရိုက်တာအသင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါကစားမှာပြင်ပမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြင်ပမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်, သို့မဟုတ်ပြင် variable တွေကို, အဖွဲ့အစည်းမျှချက်ချင်းထိန်းချုပ်ကျော်ရှိပါတယ်သူတွေကိုအမှုအရာဟူမူကား, မည်သည့်အမှု၌, သူတို့ကအထူးလေးနက်စွာသို့မဟုတ်ခွလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ထိခိုက်နိုင်သောအမှုအရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ပြင်ပမှာ variable တွေကိုပူးတှဲပါထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ:
ဥပမာအားဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသုံးပြုသွားမည်, HR databases ကို
အလုပျသမားမှဒေတာများဖြန့်ဖြူးဖို့ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအလွတ်သဘောဆက်သွယ်ရေး Expanded အသုံးချ